यी हुन विश्वकप फुटबलमा मेस्सीले बनाएका कीर्तिमानहरु, हेर्नुस के के छन ? || सुनौलो नेपाल
यी हुन विश्वकप फुटबलमा मेस्सीले बनाएका कीर्तिमानहरु, हेर्नुस के के छन ?
मस्को । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीको पृष्ठभूमिबारे धेरैलाई जान्ने इच्छा छ । उनका कीर्तिमान के-के छन् ? अहिलेसम्म उनले विश्वकपमा कति गोल गरे ? मेसीको अहिलेसम्मको विश्वकप कस्तो रह्यो ? यीलगायत थुप्रै जिज्ञाशा मेटाउने प्रयास गरेका छौं ।
उनी विश्वकप फुटबलमा आफ्नो उमेरका हरेक दशकमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । स्टार स्ट्राइकर मेस्सीले विश्वकपमा किशोरोवस्था, उमेरको २० को दशक र ३० को दशकमा गोल गरेका छन् । सन् २००६ को विश्वकपमा पहिलो गोल गर्दा किशोर थिए । २०१४ मा गोल गर्दा २० काटेर ३० नपुगेको अवस्थामा थिए ।
अहिले ३१ वर्ष काटेर ३२ लाग्दा पनि उनले गोल गरे । यसरी उमेरका तीन छिमलमा गोल गर्ने मेस्सी पहिलो खेलाडी हुन् । मेस्सीले रुसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत मंगलबार राति नाइजेरियासँगको खेलमा १४ औँ मिनेटमा सुन्दर गोल गरेका थिए । योसँगै उनले विश्वकपमा गरेको समग्र गोल संख्या ६ पुगेको छ । त्यसमध्ये आधा गोल त नाइजेरिया विरुद्ध गरेका छन् ।
सन् २०१४ को विश्वकपमा उनले नाइजेरिया विरुद्ध दुई गोल गरेका थिए भने यो विश्वकपमा एक गोल गरे । मेस्सी तीन विश्वकपमा गोल गर्ने अर्जेन्टिनाका तेस्रो खेलाडी पनि बनेका छन् ।यसअघि डिएगो म्याराडोना (१९८२, १९८६ र १९९४) तथा गाब्रिएल बातिस्तुता (१९९४, १९९८ र २००२) ले तीन विश्वकपमा गोल गरेका थिए ।
मंगलबार राति १४ औँ मिनेटमा मेस्सीले गरेको गोल रुसमा जारी विश्वकपको १०० औँ गोल थियो । यो विश्वकपमा अहिलेसम्म १०५ गोल भएको छ । मेस्सीले यो खेलमा सात पटक बल ड्रिबल गरे, योसँगै उनी समग्रमा विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै पटक ड्रिबल गर्ने खेलाडी बनेका छन् ।
उनले अहिलेसम्म विश्वकपमा १०७ पटक ड्रिबल गरेका छन् । उनले म्याराडोनाको ड्रिबल कीर्तिमानलाई उछिनेका हुन् । म्याराडोनाले विश्वकपमा १०५ पटक ड्रिबल गरेका थिए । -एजेन्सी